Ireo fitaovana ho famonjem-panahy
“Izaho namboly, Apolosy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsinontsinona izay mamboly, na izay mandena, fa Andriamanitra Izay mampitombo no izy” 1 Kôr. 3:6,7
Indreo ireo fomba mahery vaika manetsika izao tontolo izao. Ny hazo fijalian’i Kalvary no mambabo ny hery rehetra an’ireo mino an’i Kristy ho fitaovana hamonjy fanahy. Tsy maintsy miray amin’Andriamanitra ny ezaka ataon’ny olona; tsy maintsy manovo fahombiazana avy any an-danitra izany. Tokony ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra isika. Tonga manokatra ny fon’ny olona handray ny Teny ny Tompo ary ny Fanahy Masina no mampahavokatra ny Teny.
Ireo izay mandray ny fahamarinana no manana izany finoana imitondra amin’ny hetsika feno fanapahan-kevitra izany, izay miasa amin’ny fitiavana ary manadio ny fanahy. Mpanamasina noho izany ny fahamarinana. Hita eo amin’ny toetra ny heriny manova. Rehefa ampandrosoina ao anatin’ny tempolin’ny fanahy lalina ao izy, dia tsy hiasa amin’ny fomba ivelambelany sy hamela ny fo tsy voaova izy; tsy haniatra ny fihetseham-po fotsiny izy, ka hanamaivana ny fomba fijery sy ny sitrapo, fa mitondra ny tena manontolo ho amin’ny asa mirindra izy.
Ankehitriny dia hanomboka amim-pahatokiana ny asan’izay tena niova fo marina. Tsy maintsy miasa tahaka ny niasan’i Kristy izy. Tsy velona ho an’ny tenany intsony izy, fa ho an’ny Tompo manontolo. Very tsy an’izao tontolo izao izy; fa miafina ao amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra ny fiainany. Izany hoe tsy manjaka intsony ny izaho. Mihazona azy ao anatin’ny tara-pahazavana mamirapiratra ny fahazavana alefan’ny hazo fijalian’i Kalvary, mandray zavatra avy amin’i Kristy ny Fanahy dia manambara izany aminy amin’ny fahazavana manintona, izay mampisy fiovana eo amin’ny fahazarany sy fomba fiainany ary maneho fa olom-baovao ao amin’i Kristy izy. Fantany amin’ny vola ariary iray ny tokony hanaovany soa, hanampiany hambabo fanahy ho an’ny fahamarinana, hanorina ny fanjakan’i Kristy, fa tsy hanaram-po amin’ny filany, na handevina izany. Toy ny fifalian’i Kristy ny fifaliany , mahita ny fanahy voavonjy. Nahoana no kely monja ny ataontsika mba ho famonjem-panahy, kanefa betsaka ny azo atao? Nahoana no bitika ny zavatra ataontsika hitaomana ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy ho eo amin’i Kristy?